Aqlabiyadda Aamusan – (The Silen Mojority). | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Aqlabiyadda Aamusan – (The Silen Mojority).
Duruufaha iyo qabyooyinka tiro-beelka ah ee dalkeenna ka jiraa, jiho kasta wey ka yimaaddeen, siyaasiyiintii gadh-wadeenka Qaranka u ahaa, waxa ay ku fashilmeen hoggaankii dalka, hore iyo dib mid na ummadda wey u wadi waayeen; muddo 25 sanno ah xataa, waxa aan garan la’nahay waxa innaga khaldan. Hab-dhiskeena dowladeed, halka aad taabataa ba way boog damqanaysa. Tusaale,
1.Gar-soorkeennu waxu ku caan baxay,naqista gar-eexeedda, ummadduna kuma badhaadhin’e way ku baaba’day, taladu way ka barriiqatay hoggaanka caddaaladda dalka, waxa aanay ku guul-darraysteen in ay noqdaan dhexdhexaad,xeer-beegti ah. 2.Musuqmaasuqu dabarka ayuu goostay, wuxuu isku beddelay “Boob cad,” cid na wax ba iska ma weydiiso, hanti-dhowrka guud ee Qaranka ayaa qayb ka ah.
3.Maamuuskii dawladnimo faalig baa ku dhacay oo dhinac ayaa bakhtiyay!
4.Saxaafaddii xorta ahayd waa la gatay, arrima run kama sheegi karaan ee maslaxadahooda ayay ilaashaadaan.
5.Shaqo la’aantu halkii ugu sarreysay ayay maraysaa, wax rajooyin ah na ma muuqdaan.
6.Qabyaaladda sida xun loo adeegsado waxa loo kobciyay sida macdanta (Uranium-ta) loo kobciya marka laga samaynayo hubka wax gumaada.
7.Hantida qaranka loo ma sinna ee shakhsiyaad ayaa sida ay doonaan ugu takri-fala.
8.Dadkii waa la gumeeyay oo waxa aad u yar tirada xorta ah ee coloosha ka xorrowday, tiro aad u yar ayaa fikirkooda cabbiri kara iyaga oo aan la laaluushin isla markaa aan baqayn.
9.Aqoon-yahankii iyo wax-garadkii way is-dhiibeen oo way quusteen, waxa aanay daawadaan dhaca iyo boobka joogtada ah ee dalka ka socda.
Waxa la soo gaashay wakhtigii aan fadhiga ka kici lahayn ee ka fikiri lahayn aayaha ummadda iyo hurumarka dalkeena. In aan quusannaa waa gunnimo, waa liidnimo, waana wax laga yakhyakhsoodo.
Waxa mudan in aan ku bahowno mabaa’dii, innagoo dhammaanteen ay innaga go’an tahay in ummaddu badhaadhe iyo barwaaqo loo siman yahay gaadho. Inna ma kulmin doonaan, xisbiyo, ururro, qabiillo, kooxo diimeed iyo wixii la hal-maala, waxa aan ka simannahay in aan u damqannay dadkeena, carruurteena badaha ku dhammaaday, haweenkeena caarka ah ee cid walba u jabay, waa kuwaa kuwa aan rabno in aan badbaadinaa, waa dariiq xaq ah, waanan ku guulaysan doonnaa, haddii Rabbi yidhaa,
Goob aan dood-cilmiyeedyada ku wadaagno oo dal iyo dibad ba aan fikirkeenna iyo xooggeenna ku midayno in aynu helno ayaan muddo ka fikiraynay, Qoraa, abwaan A.A. Garas, ayaa magacii ugu habboonaa ee aan adeegsan lahayn helay, waana (AQLABIYADDA AAMUSAN)
F.G. Si aad dood-wadaag ula noqoto kumannaan dad ah oo ku bahooboobay wanaagga iyo in hurumar dhalku gaadho, oo afkaar falanqayn doona, Ciwaankaag/ E-mail addrees, Magacaaga oo saddexan, Magaalada aad joogto iyo dalka aad degan tahay,
Facebook: Wax-garadka ummadda.